Khad - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Khad waa nooc ka mid ah Jinka dar of pigments, ku qabanaya wakiilada (saliidaha cusbi), lagu daro sida diluent iyo dispersions dareere la shito. Waxaa laga daabacan karaa on kala duwan ee qalabka sida baakadaha, waraaqaha, bireed bir, caag, bir, maqaar iyada oo saxaafadda daabacaada ah. The muuqaalo qalabka substrate u noqon karaan guri, cylindrical, iwm Oo Halabuurka ee khad waxay ku xiran tahay habka daabacaadda iyo wax of substrate ah.
Sida laga soo xigtay nooca saxan daabacaadda. Khad loo qaybin karaa 4 nooc:
1.Lithographic khad daabacaadda
Waa magac guud ee Daac kala duwan ku haboon daabacaadda lithographic. dusha sare ee lithography a yihiin asal ahaan in diyaarada. aagga Habku waa oleophilic iyo meesha aan hannaankii waa hydrophilic. Daabacaadda ku saleysan yahay mabda'a ah in saliid iyo biyo kasta oo kale oo kada ah. Sidaa darteed, khad lithographic waa in uu leeyahay iska caabin ah biyo. khad khad Common daabacaadda lithographic oo ay ku jiraan mowjadda khad daabacaadda, gloss sare khad kabayso, resinous mowjadda khad, khad web-quudin-kabayso, khad sheet-quudin kabayso, afar midabo hab kabayso, degdeg-set mowjadda khad, mowjadda khad qasacad-daabacaadda, jeermiska caabin mowjadda waxa daasadda-daabacaadda khad iyo khad daabacaadda collotype.
Waa magaca guud ee Daac kala duwan loo isticmaalo hababka daabacaadda letterpress. Waxay inta badan ay ka mid yihiin Daac loo isticmaalo in buugaagta, wargeysyada, sawirada, biilasha, iwm feature ee khad letterpress waa in qayb ka mid khad of saxan daabaco waa ridday ka qayb ka mid ah oo aan khad. khad letterpress Common oo ay ku jiraan khad letterpress daabacid, letterpress khad midabka, khad letterpress Rotary daabacid, letterpress Rotary news khad, Rotary midabka letterpress news khad, saxan copper khad daabacaadda, letterpress khad daabacaadda filimada caag ah iyo flexographic khad daabacaadda.
3.Gravure khad daabacaadda
Waa magaca guud ee Daac kala duwan loo isticmaalo hababka daabacaadda gravure. Marka daabacaadda, aagga baxsan hannaankii ee ahaa wasladdii waa farteeda khadka leh ka dibna xoqo iska khad ka aagga non-hannaankii. Waxaa loo qaybin karaa xardhan gravure khad iyo sawiro khad gravure. Common khad daabacaadda gravure oo ay ku jiraan khad Baakadaha jilicsan, sigaarka khad duubo iyo khad daabacaadda kartoonka.
4.Mesh khad daabacaadda
Waa magaca guud ee Daac kala duwan loo isticmaalo hababka daabacaadda mesh oo si ballaaran loo isticmaalo in daabacaadda dhar, daabacaadda caag ah, daabacaadda biraha, daabacaadda dhoobada, daabacaadda galaas, daabacaadda alaabta elektaroonikada ah iyo daabacaadda bakhtiyaa, iwm mesh Common khad daabacaadda ay ku jiraan screen warqad khad daabacaadda , khad daabacaadda shaashadda caag ah, screen dhar khad daabacaadda, galaas screen khad daabacaadda, dhoobada screen khad daabacaadda, kacsan qalajiyo khad dareeraha, iwm
Changzhou Longxin ayaa wada shaqeyn la leh dad badan oo soo saaridda khad gudaha iyo dibadda caan ah oo ay ku jiraan KHAD TOYO, KHAD Indvandrerrådgivningen, KHAD DUBUIT iyo wixii la mid ah. Our Mashiinka waxaa la dhoofiyo United States, Brazil, India, Russia, Japan, Korea, Singapore, Southeast Asia iyo dalalka iyo gobollada kale, riyaaqayaa sumcad sare ka dhammaan qaybaha nolosha. Longxin leedahay sharafeedka Guddoomiye Ku-xigeenka Unit ee Chinese Association khad oo had iyo jeer waa hoggaamiyaha cusub iyo kacaankii warshadaha this. Ka sokow, waxaan ku qorshayso karaan iyo dib u dhiska khadka alaabta oo dhan mishiinka kaliya sida codsiga macaamiisha. Waxaan ku siin doonaa tayada ugu fiican iyo adeegga aad si.
Talinaynaa qalabka wax soo saarka khad: DS taxane superfine sax ah saddex dhagax duuban, taxane YS Haydarooliga saddex dhagax duuban, ee caadiga taxane siman gudaha-qaboojinta dhagax kuusha shaqayn buuxda, ay tahayna si taxane dhagax ciid socodka degdeg ah, taxane WSS dhagax ciid siman, taxane WSK High-nafwaayay superfine dhagax kuusha wejiyo
Line Product: line saarka khad oolnimada sare, khad line wax soo saarka si toos ah Gravure, khad High-nafwaayay (kabayso, UV kabayso, daabacaadda Xariir) line wax soo saarka